IPFS - အဆင့်မြင့်ဖိုင်စနစ် P2P နှင့် Blockchain နည်းပညာ Linux မှ
IPFS တစ် ဦး မောင်းထုတ်ရန်ကတိပေးထားတယ် ဖြန့်ဝေထားသောဝဘ်ဒါကြောင့်တစ် ဦး ဖြစ်ပါတယ်ကတည်းက P2P hypermedia protocol ကို (အုပ်စုတူအဆင့်တူအချင်းချင်းမှပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်း) သည်လုပ်ရန်ဒီဇိုင်းထုတ်သည် ပိုမိုမြန်ဆန်။ စိတ်ချရသော၊.
၎င်းသည်၎င်း၏အမည်ကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ဖော်ပြထားသည်။ Interplanetary ဖိုင်စနစ်စပိန်ဘာသာဖြင့်အဓိပ္ပါယ်ရသော \_ t Interplanetary ဖိုင်စနစ်၎င်းသည်၎င်းသည်အဆင့်မြင့် File System တစ်ခုဖြစ်သည် P2P နှင့် Blockchain နည်းပညာ.
လိုပဲ နည်းပညာ Blockchainလူအများမသိသေးသောအရာ IPFS အရာကကထောက်ခံသည်ပို။ ပင်ဒါဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်အဘယ်အရာကိုပို။ ပို။ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ဖြစ်ပါတယ် နည်းပညာလယ်ပြင်ကကိုယ်စားပြုကတည်းက အင်တာနက်အသွင်ပြောင်းယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သိသည်အတိုင်း
ဒီတော့ IPFSလက်ရှိဖြည့်စွက်သို့မဟုတ်အစားထိုးနိုင်ဘူး Hypertext လွှဲပြောင်း protocol ကို (HTTP)၎င်းသည်လက်ရှိနှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအဆင့်တွင်သတင်းအချက်အလက်များကို cloud (web) တွင်စီမံပေးသည်။ ထို့ကြောင့်, IPFS ၏လက်ရှိလုပ်ရပ်များအသွင်ပြောင်းဖို့ရည်ရွယ်သည် အင်တာနက်ကို အခြေခံ ဗဟိုဆာဗာများ အပြည့်အဝဖြန့်ဝေက်ဘ်ဆိုက်အောက်မှာ P2P နှင့် Blockchain နည်းပညာ.
တစ် ဦး ဖြစ်လာနိုင်ရန်အတွက် ဖြန့်ဝေဖိုင်စနစ်တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာနှင့်အတူတူညီသောဖိုင်စနစ်နှင့်ကွန်ပျူတာစက်ပစ္စည်းများနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်အကြောင်းအရာအားလုံးကိုဆက်သွယ်နိုင်သည့်လမ်းညွှန်များနှင့်ဖိုင်များပါရှိသည်။
1 IPFS: Interplanetary ဖိုင်စနစ်
1.1 IPFS သွင်ပြင်လက္ခဏာများ
IPFS: Interplanetary ဖိုင်စနစ်
ယင်း၏အတွက် တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက် ၎င်းနည်းပညာ၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်လည်းထိုနည်းပညာနှင့် ပတ်သက်၍ အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များစွာရှိသည် GitHub။ သို့သော်၎င်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပြောနိုင်သည့်အထင်ရှားဆုံးသောအချက်များမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
၎င်း၏ရည်မှန်းချက်မှာဝဘ်ကိုပိုမိုမြန်ဆန်စေရန်၊ ပိုမိုလုံခြုံစေရန်နှင့် ပိုမို၍ ပွင့်လင်းစေရန်ဖြစ်သည်။
၎င်းသည် FUSE နည်းပညာကို အသုံးပြု၍ တပ်ဆင်နိုင်သောကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဖိုင်စနစ်ဖြစ်သည်။
၎င်းသည် Blockchain, Kademlia, BitTorrent နှင့် Git ကဲ့သို့သောနည်းပညာများကိုအသုံးပြုခြင်းကိုပေါင်းစပ်ထားသည်။
အကြောင်းအရာနှင့်အထောက်အထားများအားဖြင့်မောင်းနှင် Hypermedia ဖြန့်ဖြူး protocol ကို။
၎င်းတွင် SNS အက်ပလီကေးရှင်းပေးသောအမည်ပေးစနစ်ဖြစ်သော IPNS ဟုခေါ်သည့်နာမည်ပေးဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုရှိသည်။
၎င်း၏စစ်ဆင်ရေးသည် git object များဖလှယ်သည့် bittorrent swarm နှင့်ဆင်တူသည်။
၎င်းသည် modular ဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်မတူညီသောလုပ်ဆောင်မှုများနှင့်နည်းပညာများနှင့်အလုပ်လုပ်သောအလွှာများစွာကိုထောက်ပံ့ပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
Dual Web, ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းသည်စာရွက်စာတမ်းများကိုရိုးရာဝက်ဘ်ဆိုက်၌ကြည့်ရှုရန်ခွင့်ပြုသည် သည် HTTPတွင် «https://ipfs.io/<path>», သို့မဟုတ်ခေတ်သစ်နည်းဖြင့် browser (ဘရောက်ဆာ) များ (သို့) အပလီကေးရှင်းများ၊ IPFS: «ipfs://URL» o «dweb:/ipfs/URI».
IPFS တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် ဖြန့်ဝေဖိုင်စနစ် ကြောင်းအာမခံပါသည် အမြဲတမ်းရရှိနိုင်မှု သူတို့ထဲက, ခွင့်ပြုသဖြင့် မိတ္တူမျိုးစုံ ကွဲပြားခြားနားသော၌တည်၏ node များ ကွန်ယက်ကိုထောက်ပံ့သော။ IPFS ကိုင်တွယ်သည့်အကြောင်းအရာအပေါ် အခြေခံ၍ ဆက်သွယ်ရေးများကိုစီမံသည် နာမည် (IP လိပ်စာသို့မဟုတ် URL) လက်ရှိအမှုဖြစ်သကဲ့သို့တစ် ဦး ပေး သိုလှောင်မှုမော်ဒယ်ပိတ်ဆို့ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တဲ့အကြောင်းအရာအတွက်၊ သင့်ရဲ့အကြောင်းအရာအတွက်လိပ်စာပြုနိုင်တဲ့ hyperlink များပါရှိသည်။
ဒါ့အပြင်အသုံးပြုပါ IPFS အမှတ်အသား အရာနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည် Cryptographic hash မည်သည့်သေးငယ်သည်ဖြစ်ပါစေ၊ ၎င်းသည်ဖိုင်၏အကြောင်းအရာကိုမူရင်းအဖြစ်မူရင်းအဖြစ်ကိုယ်စားပြုသည်ဟု cryptographic လမ်းဖြင့်အာမခံသောပါဝင်မှု၏ပါဝင်မှု။ ဒါဟာအကျိုးရှိစေတယ် ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲကိုင်တွယ်ဆန့်ကျင်အကြောင်းအရာကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်၎င်း၏ပျက်စီးခြင်း, အကြောင်းအရာများ၏မပြောင်းလဲနိုင်သောအရာများနှာ.
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်၊ ဒီနည်းပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အခြားအချက်များစွာမှာ၊ node ကွန်ယက်ကို, ပါ ၀ င်သည့်အကြောင်းအရာများကိုကြည့်ရှုခြင်းအားရှုံးနိမ့်မှုများကိုလျော့နည်းစေခြင်းသို့မဟုတ်ဖျက်သိမ်းခြင်းကွန်ယက် node တစ်ခုတွင်သိမ်းဆည်းထားသည့်အကြောင်းအရာနှင့်ဆက်သွယ်မှုပျက်ကွက်ပါကအခြားတစ်ခုကိုဆက်သွယ်နိုင်သည်။ ထို့အပြင် IPFS ဆက်သွယ်မှုများတွင်များသောအားဖြင့်ပိုမိုထိရောက်သည်၊ အကြောင်းမှာ node များအများအပြားမှတစ်ဆင့်တစ်ပြိုင်တည်း transmission ကိုခွင့်ပြုထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
အရင်းအမြစ်ဖိုင်များကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်သို့မဟုတ် Cross-platform installers (၀ င်းဒိုး၊ MacOS နှင့် Linux) ၎င်း၏ကွဲပြားခြားနားသော applications များ၏တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်အသုံးပြုမှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းရရှိနိုင်ပါနှင့်ထွက်သယ်ဆောင်, သင်သည်အောက်ပါ link ကိုတိုင်ပင်ခြင်းဖြင့်စတင်နိုင်ပါသည်: IPFS Desktop en GitHub.
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် ဤ "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" အပေါ် «IPFS», အရာနည်းလမ်းများ «Sistema de Archivos Interplanetario»နှင့်အမှန်တကယ်ဖြစ်သောအဆင့်မြင့်တစ်ခုဖြစ်သည် P2P နှင့် Blockchain နည်းပညာနှင့်အတူဖိုင်စနစ် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအသုံးပြုမှုနှင့်နယ်ပယ်နှင့်အတူ, တစ်ခုလုံးကိုအဘို့, ကြီးသောအကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုဖြစ်ပါတယ် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်များအတွက်အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ applications များနှင့်ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့မှကြီးသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » IPFS - အဆင့်မြင့်ဖိုင်စနစ် P2P နှင့် Blockchain နည်းပညာ
ဒီနည်းပညာအမျိုးအစားကိုထောက်ပံ့ထားပြီးသားလား (သို့) ဘရောင်ဇာများက၎င်းကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်အစီအစဉ်ရှိသလား။
Luiguiok ကိုနှုတ်ဆက်သည်။ IPFS တွင်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် desktop client နှင့်အခြားအက်ပလီကေးရှင်းများရှိသည်။ ယခုတိုင်အောင်ရိုးရာဘရောင်ဇာများမှတဆင့်မဖြစ်နိုင်ပါ။
Photopea - သင်ကြိုက်နှစ်သက်သော browser မှသင်အသုံးပြုနိုင်သည့် Photoshop အတွက်အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခု
Canonical မှ Ubuntu 20.04 တွင်ထိုအခင်းအကျင်းကိုပြောင်းလဲရန်စီစဉ်သည်